Stephen King မှ 'Becka Paulson ၏ထုတ်ဖော်ချက်များ' သည် CW သို့ ဦး တည်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း Stephen King မှ 'Becka Paulson ၏ထုတ်ဖော်ချက်များ' သည် CW သို့ ဦး တည်သည်
by Waylon ဂျော်ဒန် ဇူလိုင်လ 21, 2020
ကရေးသား Waylon ဂျော်ဒန် ဇူလိုင်လ 21, 2020
အဆိုပါ CW မှလိုက်လျောညီထွေအခွင့်အရေးများကောက်ယူခဲ့သည် စတီဖင်ကင်းရဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ“ Becka Paulson ၏ဗျာဒိတ်တော်များ” ဇာတ်လမ်းတို ဗျာဒိတ်ကျမ်း နောက်ဆုံးနေ့အရသိရသည်.
လက်သည်းဖြင့်သေနတ်ဖြင့် ဦး နှောက်တွင်မိမိကိုယ်ကိုမတော်တဆသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီးနောက် Polocanna-ish Becca Paulson သည်ယေရှုအားကမ္ဘာပေါ်ရှိကမ္ဘာပျက်ကမ္ဘာပျက်စေခြင်းလုပ်ငန်းကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်သူ၏“ ရွေးချယ်ထားသူ” အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ရန်အတွက် Becca သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နက်ရှိုင်းစွာနောက်ပြန်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုရွေးနုတ်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြရန်လိုလိမ့်မည်။ သူမ၏အနောက်မြောက်ဘက်ရှိအနောက်မြောက်ပိုင်းရှိသူ၏ဇာတိမြို့ဖြစ်သည်။
Maisie Culver (နောက်ဆုံးက Man အမြဲတမ်း) သည် King's ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံ၍ စီးရီးများကိုရေးသားရန်စီစဉ်ထားပြီး၊
အဆိုပါဇာတ်လမ်းကိုမူလပြofနာတစ်ခုတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည် Rolling Stone ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာပြန်ပြီး ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် ပြင်ပကန့်သတ်ချက်များ (ပုံပုံ) အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကကက်သရင်းအိုဟားရား (Schitt ရဲ့ Creek အဘိဓါန်), John Diehl (Stargate), နှင့်စတီဗင် Weber (တောက်ပနေသော အသေးစားစီးရီး) ။ Weber လည်းဇာတ်လမ်းတွဲညွှန်ကြားခဲ့သည်။
King's collection များထဲမှတစ်ခုကိုတစ်ခါမျှမထည့်ဖူးသော်လည်းသူ၏ဝတ္ထုထဲမှ subplot တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည် အဆိုပါ Tommyknockers.
ဒါဟာ Culver ဇာတ်လမ်းတိုကိုစီးရီးအဖြစ်ချဲ့ထွင်နိုင်ပုံကိုကြည့်ဖို့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။
iHorror ကမင်းကိုဆက်ပြီးပြောမယ် ဗျာဒိတ်ကျမ်း အသေးစိတ်ကိုမရရှိနိုင်ဖြစ်လာအဖြစ်။
Katie LovejoyMaisie Culverဗျာဒိတ်တော်များBecka Paulson ၏ဗျာဒိတ်တော်များStephen Kingအဆိုပါ CWWaylon ဂျော်ဒန်
WATCH - ဒါရိုက်တာ Rob Grant ရဲ့ 'Alive' အတွက်သရုပ်ဆောင်ဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီးပြင်းထန်သည်။
'Sputnik' နောက်တွဲယာဉ်သည်ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် Gory အကြမ်းဖက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်